လူဟောင်းကြီးတွေပါနေတာ နားမလည်နိုင်စရာ သရ၀ဏ်(ပြည်) | dawnmanhon
လူဟောင်းကြီးတွေပါနေတာ နားမလည်နိုင်စရာ သရ၀ဏ်(ပြည်)
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရာတွင် စစ်အစိုးရလက်ထက်မှ စစ်ဗိုလ်ချုပ်လူဟောင်းကြီးများပြန်ပါလာတာကိုပြည်သူလူက ထူးဆန်းနေလေသည် ။ ၀န်ကြီးဌာနနှစ်ခုနှင့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းကို နိုဝင်လာ ၂၀ရက်နေ့က လွှတ်တော်သို့ သမ္မတကသ၀ဏ်လွှာပို့ ပြီးအတည်ပြုချက်ယူခဲ့ရာ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကအဖြစ် ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက်က ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးတာဝန်နှင့် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးတာဝန်များယူခဲ့ဖူးသူ အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်အောင်ကြည် သည်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်တွင် ဥက္ကအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရပေသည် ။ ထိုအခါဝေဖန်သံတို့ ကျယ်လောင်စွာထွက်ပေါ်လာပေသည် ။ လူမရှိတော့လို့ လူဟောင်း စစ်ဗိုလ်တွေကိုပဲပြန်သုံးတာလား၊ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကိုရှေးရှုပြီး စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေကိုရာထူးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေးနေတာလား၊ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့အဂတိလိုက်စားမှုကို စစ်ဗိုလ်ချုပ်ချင်းပဲပိုသိနိုင်မှာမို့ အဂလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးမှာ စစ်တပ်ကလာသူကိုပြန်ခန့်သလားဟု အမျိုးမျိုးတွေးစရာဖြစ်လာပေသည် ။
မြန်မာတပြည်လုံးသည် ခြတောင်ပို.ကြီးသဖွယ်ဖြစ်နေသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သည် ။ အကျင်.ပျက်ခြစားမှုသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏အဓိကပြသနာဖြစ်လာနေသည်မှာ အမှန်တရားဖြစ်ပေ၏ ။ မည်သူတွေအကျင်.ပျက်ခြစားသနည်း ။ နယ်ပယ်စုံမှလူများအကျင်.ပျက်ခြစားပါ၏ ။ အစိုးရ၀န်ထမ်းများ (အမှန်မှာပြည်သူ.၀န်ထမ်းများ) သည်အဓိကလာဘ်စားကြပါ၏ ။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတွင်ပါဝင်ပါတ်သက်နေကြပါ၏ ။ ရာထူးကြီးလေ လာဘ်စားမှုကြီးမားလေဟုပင်ပြော၍ရပေ၏ ။ မြန်မာနိုင်ငံသားများတွင် လာဘ်မပေးဘူးသူ၍ နို.စို.ခလေးမှလွဲ၍ခပ်ရှားရှားပင်ဖြစ်ပေလိမ်.မည် ။ ရုံးပြင်ကနားများသို.၀င်ထွက်ရာတွင် အနည်းနှင်.အများဆိုသလို အားလုံးပေးဖူး ကမ်းဖူးသူတွေပင်ဖြစ်သည် ။ လာဘ်ပေးရလွန်းသဖြင်. မိမိလာဘ်ပေးနေမှန်း ၊ယူသူကလည်းလာဘ်ယူနေမှန်းပင်မသိလောက်အောင် ပေးခြင်း ၊ယူခြင်းကိစ္စ ၊ အလွဲသုံးစားကြခြင်းကိစ္စ၌ အသားကျခဲ.ပြီဖြစ်သည် ။
လက်ဖက်ရည်ဖိုးပေးသည် ၊ ခေါက်ဆွဲစားသည် ၊ ဂါရ၀ပြုသည် ၊ နားလည်မှုဖြင်.ပြုစုသည် ၊ ကန်တော.သည် ၊လက်ဆောင်ပေးသည်ဆိုခြင်းများနောက်ဝယ် လက်ပေးလာဘ်ယူအကျင်.ပျက်မှုသည် တခါတည်းပါလာစမြဲဖြစ်သည် ။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်က ၂၂.၇.၂၀၁၅ နေ.ထုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာထဲတွင်ဖတ်ရသည်မှာ မွေးမြူရေးနှင်.ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနသို.အကြွေးပေးဆပ်ရန်ပျက်ကွက်သည်.လုပ်ငန်းရှင်များအား အများနှင်.သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းကာကွယ်စောင်.ရှောက်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ (၃) ဖြင်.တရားစွဲဆိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ဟူသောသတင်းဖြစ်သည် ။ မွေးမြူရေး၊အစားအစာနှင်. နို.ထွက်ပစ္စည်း လုပ်ငန်းသည် ၂၀၀၃-၂၀၀၄ ဘဏ္ဍာနှစ်မှစကာ ငါးစာတောင်.များကိုလုပ်ငန်းရှင်များထံစာရင်းမှတ်စနစ်ဖြင်.စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ.ရာမှ ပေးဆပ်ရန်အကြွေးများတဖြည်းဖြည်းများလာခဲ.ကာ ငွေကျပ် ၂၉ ဒသမ ၄၄၂ ဘီလီယံ ရှိနေကြောင်းသိရပေသည် ။ ထို.ကြောင်. ပြည်သူဘဏ္ဍာငွေဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန်အတွက် ကြွေးကျန်လုပ်ငန်းရှင်များအား ပြစ်မှုကြောင်းအရတရားစွဲအရေးယူရန် ဆုံးဖြတ်ပြီး အများနှင်.သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းကာကွယ်စောင်.ရှောက်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ (၃) ဖြင်.တရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းစာတွင်ဖော်ပြခဲ.သည် ။ ကြွေကျန်အများဆုံးပုဂ္ဂိုလ် (၁၀) ဦးအမည်စာရင်းကိုဖော်ပြခဲ.ရာ ဦးမင်းသိမ်း ဆိုသူမှာ အမှတ်စဉ် (၁) နှင်. အမှတ်စဉ် (၂) ဟူ၍ နှစ်ကျော.ပြန် နှစ်ခါပြန်ပါနေသည်ကို အံ.သြဖွယ် တွေ.ရှိရသည် ။ ပို၍အံ.သြစရာကောင်းသည်မှာ အကြွေးဆပ်ရမည်.ပမာဏမှာ ပထမ အကြိမ်တွင် ကျပ်သန်းပေါင်း ၆၇၅၅ ကျော် ၊ ဒုတိယအကြိမ်တွင် ၄၈၂၄ သန်းကျော် ( နှစ်ကြိမ်ပေါင်းအတွက် ကျပ်သန်းပေါင်း ၁၁၅၇၉ ) ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်သည် ။ ထိုမျှများပြားသောငွေကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကတည်းကမပေးဆပ်ခြင်းကို ဆယ်.နှစ်နှစ်ကြာသည်. ၂၀၁၅ အထိ အရေးယူခဲ.ခြင်းမရှိသည်.အပေါ်တွင်အံ.သြမိပါသည် ။ သာမန်တိုင်းသူပြည်သားများမှာ ယခုလမီတာမဆောင်နိုင်လျှင် ယခုလပင် မီးလာဖြတ်ခံရစမြဲဖြစ်သည် ။ ယနေ.ဈေးကောက်မပေးနိုင်လျှင် ယနေ.ပင် လမ်းဘေးဈေးဆိုင်အပိတ်ခံရမည်ဖြစ်သည် ။ အစိုးရသို.ပေးရန်ရှိသော ငွေကျပ်ထောင်ဂဏန်း ၊သောင်းဂဏန်းမှသည် ၊သိန်းဂဏန်းအထိ မည်သည်.အခါမှ စောင်းဆိုင်းရိုး ၊ သည်းခံရိုး ၊ မေ.လျှော.ရိုးမရှိသည်.အစိုးရက ငွေကျပ် ၂၉ ဘီလီယံ ( ၁ ဘီလီယံ သည် သန်းတစ်ထောင်ဖြစ်သည် ) ကို ၁၂ နှစ်အမေ.ခံထားသည်ဆိုခြင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည် ။ ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်မှာ အကြွေးပေးခဲ.သူ ၀န်ကြီး ဦးမောင်မောင်သိမ်းနှင်. အကြွေးယူခဲ.သူ ဦးမင်းသိမ်းတို.သည် သားအဖတော်စပ်နေခြင်းဖြစ်သည် ။ အဖေက၀န်ကြီး ၊ သားက ထိုဝန်ကြီးဌာနမှ ငွေသန်းပေါင်းတစ်သောင်းကျော် (သိန်းပေါင်းတသိန်းတသောင်းကျော်) ကို အကြွေးယူခဲ.သည် ။ စာရင်းပျောက်အင်းပျောက် နှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်နေခဲ.သည် ။ထိုသို.ယူထားသူများမှာလည်မနည်းမနောပင်ဖြစ်သည် ။ ဦးသုတရွှေဆိုသူက ကျပ်သန်းပေါင်း (၆၀၂၆ ) သန်း ၊ ဦးဇော်ဇော်တိုး ဆိုသူက ကျပ်သန်းပေါင်း (၂၀၅၇)သန်း ၊ ဦးကြည်ဝင်းဆိုသူက (၁၄၆၉)သန်း ၊ ဦးဟိန်းဇော်စစ်ဆိုသူက ကျပ်သန်းပေါင်း(၁၄၁၀)သန်း(ဦးဟိန်းဇော်စစ်ဆိုသူ၏အဘအမည်ကိုသတင်းစာထဲတွင်ဖော်ပြခြင်းမပြုပဲချန်လှပ်ထားခဲ.သည် ။ တပ်မတော်အရာရှိကြီးတဦး၏သားမို.အချင်းချင်းဝိုင်းဝန်းဖုံးဖိပေးခြင်းဟုအချို.ကဝေဖန်ကြသည် ) ၊ ဦးမျိုးအောင်ဆိုသူက ကျပ်သန်းပေါင်း(၁၂၇၉) သန်း၊ ဦးမိုးဆိုသူက ကျပ်(၇၇၆ )သန်း ၊ဦးခင်စိုးက ကျပ် (၅၀၆)သန်း ၊ ဦမျိုးမင်းသိမ်းက ကျပ်သန်းပေါင်း ( ၄၈၄)သန်း တို.ဖြစ်ကြသည် ။ အခြားသူများလဲအမြောက်အများကျန်ရှိသေးသည်ဟုသိရ၏ ။ တိုင်းသူပြည်သားများ အလုပ်သမားများအတွက်တနေ.လုပ်ခ ကျပ် ၃၆၀၀ ရရှိရန် သွေးနှင်.ချွေးနှင်.ရင်း၍တောင်းဆိုနေရချိန်တွင် အာဏာရှိအသိုင်းအ၀ိုင်းက နိုင်ငံ.ငွေကို အလွဲသုံးစား လုပ်ကြပုံများမှာ ယုံနိုင်ဖွယ်ရာမရှိ ။ ဒါတောင်ပြည်သူ.လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်စန္ဒာမင်းက ပထမအကြိမ်ပြည်သူ.လွှတ်တော်(၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး တွင် မေးမြန်းခဲ.သဖြင်.ပေါ်ပေါက်လာခဲ.ခြင်းဖြစ်ရာ မမေးမြန်းနိုင်သေးသောအလွဲသုံးစားမှုပေါင်းဘယ်ရွေ.ဘယ်မျှကျန်သေးသနည်းဟုတွေးဆဖွယ်ရာဖြစ်သည် ။သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနသို. ရွေတူးဖော်သောကုမ္မဏီများမှ ပေးသွင်းရန် ရွှေပိသာချိန်ပေါင်းများစွာကျန်ရှိနေသောသတင်းကို ယခင်နှစ်များက ဖတ်လိုက်ရသည် ။ ပိသာပေါင်းများစွာနိုင်ငံတော်သို.ပေးသွင်းရမည်.ရွှေများသည် ယခုအခါအကြေအလည်ပေးသွင်းပြီးသွားပြီလား ။ ထုံးစံအတိုင်း ဆက်မတောင်းပဲ ဟိုလိုလိုသည်လိုလိုဖြင်.ပြီးသွားပြီလားစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည် ။ထိုသို့နိုင်ငံတော်သို့ ပေးရမည့်ရွှေများမပေးသွင်းပဲနေခြင်းမှာ အဂတိလိုက်စားမှု၊အာဏာဖီဆန်မှု၊ နိုင်ငံတော်ပိုင်ပစ္စည်းအလွဲသုံးမှုများသာဖြစ်သည် ။ ၀န်ကြီးဌာနများသည် စည်းကမ်းနှင်.မညီသော ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲမှုများပြုလုပ်နေကြောင်းပြည်သူ.လွှတ်တော်ငွေစာရင်းဌာနကမကြာခနတင်ပြခဲ.ဖူးသည် ။ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင်.ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ကချင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များကိုကူညီရန် နိုင်ငံတော်မှ ကျပ်သိန်းတထောင်ထုတ်ယူသွားပြီး အလှူရှင်ပေါ်ပေါက်လာသောကြောင်.ဟုဆိုကာထိုငွေသိန်းတထောင်ကိုအခြားနေရာတွင်ပြောင်းရွေသုံးစွဲလိုက်ခြင်းသည် ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများနှင်.မညီညွတ်ကြောင်းမစီရင်ခံစာတခုမကြာမီကပေါ်ထွက်လာဖူးသည် ။ ယခုအစိုးရလက်ထက်တွင်နိုင်ငံတော်စာရင်းစစ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်လွန်းမောင်က နိုင်ငံတော်စာရင်းများကိုတိတိကျကျဖော်ထုတ်သောအခါ ရာထူးမှအနားပေးခံရတာလည်း စိတ်ဝင်စားဖို.ကောင်းသည် ။ နိုင်ငံတော်သည် စာရင်းစစ်မခံနိုင်သည်.အသွင်ဆောင်နေပါသည် ။
လုပ်ခဲ.ကိုင်ခဲ.ကြသည်မျးကတော.ခပ်ရိုးရိုးအကွက်များပဲဖြစ်သည် ။ အဖေက၀န်ကြီးဖြစ်သည် ။ သားကကုမ္မဏီထောင်သည် ။ သားပစ္စည်းကို ဖခင်ဝန်ကြီးဌာနကိုမ၀ယ်မနေရရောင်းမည် ။ ဖခင်ဝန်ကြီးက သားကို ငွေထုတ်ချေးမည် ။လုပ်ပိုင်ခွင်.များချပေးမည် ။ ကန်ထရိုက်များချပေးမည် ။ တင်ဒါအောင်မည် ။အဖေနှင်.သား ပေါင်းကာနိုင်ငံ.ဘဏ္ဍာငွေများ ပျော်ပျော်ပါးပါး အသုံးချကြမည် ။ စာရင်းစစ်မရှိ ၊ ပြိုင်ဘက်မရှိ ၊ မရမှာမပူနှင်. မမြတ်မှာမပူနှင်.၊ သူဌေးမဖြစ်မှာမပူနှင်. ။ ချက်ခြင်း ဇောတိက ၊ အနာတပိဏ် ၊ ဇေတ၀န်တို.လိုချမ်းသာစေရမည် ။ ဘေလ်ဂိတ်တို.ကိုသနားသည် ။ ဤအဖြစ်များသည် မွေးမြူရေး၊ရေလုပ်ငန်း နှင်.ကျေးလက်ဒေသဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဌာနတခုတည်းကိုဆိုလိုသည်မဟုတ် ။ အဖေနှင်.သားပေါင်းကာရိုက်စားခွင်လုပ်မှုသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏၀န်ကြီးဌာနအသီးသီးတွင်အမြစ်တွယ်နေသည်မှာကြာချေပြီ ။ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနမှဝန်ကြီးများကိုတာဝန်မှ ရပ်ဆိုင်းလိုက်စဉ်က အကျင်.ပျက်ခြစားမှုများကြောင်.ဟု ပြောသံများထွက်ပေါ်ခဲ.သော်လည်း အစိုးရသည် မည်သည်.အခါမှ လာဘ်စားမှုများကို ထိထိရောက်ရောက်ပွင်.လင်းစွာကြေငြာရိုးမရှိခဲ.ပေ ။ ကျပ်သန်းပေါင်းဘီလီယံချီ၍ ငွေကြေးကွာဟမှုများဖြစ်နေစဉ်တွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဌဟောင်း ( သာသနာရေးဝန်ကြီး ) ဦးဆန်းဆင်.ကို ငွေကျပ် သိန်း (၁၀၀ )ကွာဟမှုဖြင်.ထောင် (၁၀)နှစ်ချခဲ.ခြင်းမှာလည်း အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်သည်ထက် နိုင်ငံရေးအငြှိုးဖြင်.ဆောင်ရွက်သလိုဖြစ်နေပေသည် ။ ကြီးမားသောအမှုကြီးများမှာမူကားမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဘယ်သောအခါမှထိထိရောက်ရောက်အရေးယူခံရသည်မရှိခဲ.ပါ ။ လာဘ်စားသောတရားသူကြီးကို ရာထူးမှအနားယူခိုင်းခြင်းသည် စည်းစိမ်မပျက် ခိုးရာပါပစ္စည်းကိုခံစားစံစားစေသည်နှင်.တူနေပေသည် ။အာဏာအလွဲသုံးမှု ၊အဂတိလိုက်စားမှုတို.အတွက် ဦးဆန်းဆင်.မှတပါး မြန်မာနိုင်ငံဝယ် မည်သည်.၀န်ကြီး မှ ထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေးခံရခြင်းမရှိသေးချေ ။ထိုသို့ အလားတူဖြစ်ရပ်များကို ဦးအောင်ကြည်ကိုင်တွယ်နိုင်မလား၊ကိုင်တွယ်ရဲမလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည် ။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဟောင်းသည် ဒေသရန်ပုံငွေ ခုနစ်ဘီလီယံကို NLD အစိုးရအားလွှဲပြောင်းမပေးသဖြင့်ပြသနာတက်ခဲ့ဖူးသည် ။ နောက်တော့ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်ငွေအချို့ပြန်ပေးသည် ။ ပြန်ဆပ်တာပင် လိုငွေကကျန်နေသေးသည်။ အဲဒါတွေကိုဘယ်လိုရှင်းမည်လဲဆိုတာလဲသေသေချာချာမသိရချေ ။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရသည်လည်းကျပ်ငွေလီလီယံနှင့်ချီကာ ဒေသဖွံဖြိုးရေးရန်ပုံငွေများကို နောက်တက်လာသော NLD အစိုးရကိုမအပ်သဖြင့်ဝေဖန်သံတွေညံနေသည် ။ ထိုငွေများကိုဖောင်ဒေးရှင်းဖွဲ့ပြီးသုံးလိုက်ပြီဖြစ်သဖြင့် နောက်အစိုးရကိုစာရင်းရှင်းစရာမလိုသလိုလို ယခင်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များကပြောကြသည် ။တကယ်တော့နိုင်ငံတော်ပိုင်ငွေများဖြစ်၍ စာရင်းရှင်းကိုရှင်းရမည် ။စာရင်းစစ်ကိုစစ်ရပေမည် ။ဒါတွေကို ဦးအောင်ကြည်လုပ်ရဲမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမည် ။
ကမ္ဘာတွင် အဂတိလိုက်စားမှု အကင်းရှင်းဆုံးဆယ်နိုင်ငံသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်၏ ။
၁ ဒိန်းမတ် ။၂ နယူဇီလန်။ ၃ ဖင်လန။်၎ ဆွီဒင်။၅ နော်ဝေ။ ၆ စင်္ကာပူ။ ၇ ဆွစ်ဇာလန်။၈နယ်သာလန်။၉ သြစတေးလျ။၁၀ကနေဒါ နိုင်ငံတို.ဖြစ်သည် ။ အရှေ.တောင်အာရှမှ စင်္ကာပူသည် ကမ္ဘာ.လာဘ်မစားဆုံးနိုင်ငံတွင် နော်ဝေနိုင်ငံနှင်. ပူးတွဲလျက် အဆင်. (၅ ) ရရှိထား၏ ။ စင်္ကာပူမှ သုံးနာရီခန်.လေယာဉ်ဖြင်.သွားသည်နှင်.ရောက်လာသော မြန်မာနိုင်ငံမှာမူ ကမ္ဘာ.လာဘ်မစားဆုံး တွင် ၁၇၅ နိုင်ငံတန်းစီရာ နံပါတ် ၁၅၇ ဖြစ်သည် (မြန်မာအောက်တွင် ၁၈ နိုင်ငံ ရှိသေးသဖြင်.ကြံဖန်ဂုဏ်ယူနိုင်သေး၏ ) ။စင်္ကာပူသည်အဘယ်.ကြောင်. ကမ္ဘာ.လာဘ်ပေးလာဘ်ယူအနည်းဆုံးနိုင်ငံစာရင်းတွင် အဆင်. (၅) ၀င်ရသနည်း ။ ရှင်းပါ၏ ။လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုကိုအစိုးရက အမှုကြီးသည် ငယ်သည်မရွေး ၊ ရာထူးကြီးသည် ငယ်သည်မခွဲပဲ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူသောကြောင်.ဖြစ်သည် ။ စင်္ကာပူတွင် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ.Corrupt Practices Investigation Bureau( CPIB ) အဖွဲ.ဟူ၍ဖွဲ.ထားရာထိုအဖွဲ.သည် လုပ်ပိုင်ခွင်.အာဏာအပြည်.ရှိသဖြင်. အစိုးရဌာနတိုင်းကကြောက်ကြရသည် ။ CPIB အဖွဲ.နည်းတူ နိုင်ငံတော်စာရင်းစစ်အဖွဲ.သည်အလွန်အာဏာရိပေ၏ ။ CPIB အဖွဲ.၀င်များမှာသန်.ရှင်းသောသူများနှင်.သာဖွဲ.ထားသည် ။ ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကြေငြာထားရသည် ။ အချင်းချင်းငွေချေးငှားခွင်.ပင်မရှိ ။ဘဏ်များမှ သုံးလစာထက်ပို၍ အကြွေးယူခွင်. ၊အကြွေးဝယ်ခွင်.မရှိ ။မိမိတို.စုံစမ်းနေသူများနှင်. အပျော်အပါး၊ကပွဲ ၊စားသောက်ပွဲများ သွားခွင်.မရှိ ။ တနှစ်ကုန်လျှင်ထိုအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ.၀င်များအား နိုင်ငံတော်မှဒေါ်လာသိန်းနှင်.ချီ၍ ဆုငွေချီးမြင်.၏ ။ ထိုအဖွဲ.က ခေါ်လျှင် အားလုံးသွားရောက်ပြီးအစစ်ခံရသည် ။CBI ၀န်ထမ်းများသည် အစိုးရအမှုထမ်းများ၊လွှတ်တော်အမတ် ၊ အရာရှိကြီးများ ၊ လိုအပ်ပါက ၀န်ကြီးချုပ်အထိ စစ်ဆေးမေးမြန်းပိုင်ခွင်.ရှိလေသည် ။ CPIB ထံရောက်လာသော အမှု များအနက် သုံးပုံ နှစ်ပုံမှာအရေးယူအပြစ်ပေးခံကြရလေသည် ။ ပြည်သူလူထုထံမှလာဘ်စားမှုအတွက်တိုင်ကြားချက်များ၊ အကြံပေးချက်များကို စုံစမ်းသည် ။ သတင်းပေးသူကိုအပြည်.အ၀လုံခြုံမှုပေး၏ ။ မြန်မာပြည်တွင်တော.ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည် ။ သတင်းပေးသူကိုပင် မမှန်ကန်ကအရေးယူမည်.သဘောမျိုး ဥပဒေပြဌာန်းထား၏ ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်လာဘ်ပေးလာဘ်ယူတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်အား ၂၀၁၄ တွင်သမ္မတနှင်.လွှတ်တော်မှဖွဲ.စည်းခဲ.ပေသည် ။ စင်္ကာပူ CPIB ကဲ.သို. လုပ်ပိုင်ခွင်.အာဏာအပြည်.ရှိသောအဖွဲ.တော.ဟုတ်ဟန်မတူ ။ အဖွဲ.ဥက္ကဌမှာ ဦးမြ၀င်း(စစ်မှုထမ်းဟောင်း) ၊ အတွင်းရေးမှူးမှာ ဦးတင်ဦး(သံအမတ်ကြီးဟောင်း) ၊ အဖွဲ.၀င်များမှာဦးကျော်ကျော် ( နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ချုပ် ) ၊ ဦးစိုးတင်.(ညွှန်မှူး ၊ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး) ၊ ဦးသန်းအောင် (ရှေ.နေချုပ်ရုံး ) ဦးမောင်ရှိန်(စစ်မှုထမ်းဟောင်း) ၊ ဒေါက်တာတိုက်စံ (ပါမောက္ခ-တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်) ၊ ဦးနေ၀င်း(သံအမတ်ကြီး) ၊ စသည်.ညွှန်မှူး ၊ညွှန်ချုပ် အများစုပါဝင်သောအဖွဲ.ဖြစ်သည် ။ သို.သော် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယနေ.အထိ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုကြောင်. စင်္ကာပူမှာလို ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူသည်.ကြီးမားသောအမှုများတစ်မှုမှမပေါ်ပေါက်သေးချေ ။ ဦးဆန်းဆင်.၏ သိန်း ၁၀၀ အလွဲသုံးစွဲမှုသာရှိပေရာ သိန်းတရာထက်မကအလွဲသုံးစားခဲ.ကြသော မြန်မာအစိုးရ အရာရှိကြီးများ၏ အမှုများမှာ ကိုယ်ပျောက်ဆေးစားထားသကဲ.သို. ပျောက်ခြင်းမလှပျောက်ကွယ်နေပေတော.သည် ။
တချို.ကထင်ကြသည်မှာ ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၄၅ တွင် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ.၊သို.မဟုတ် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင်.ဖွံ.ဖြိုးရေးကောင်စီ အဖွဲ.၀င်တစ်ဦးဦး ၊သို.မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ.၀င်တစ်ဦးဦး၏တာဝန်အရဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ်အကြောင်းပြုလျက် ယင်းတို.အားတရားစွဲ ဆိုခြင်း၊ အရေးယူခြင်းမရှိစေရ ဟုပါရှိသောကြောင်. ၎င်းတို.ငွေကြေးအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ.သည်များကို စစ်ဆေးအရေးယူပိုင်ခွင်.မရှိဟုထင်မြင်နေကြပေသည် ။ ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် အတိအလင်းရေးထားသည်မှာ တာဝန်အရဆောင်ရွက်ချက်များ အပေါ်အရေးယူခြင်းမရှိစေရဟုရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည် ။ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာ အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းသည် တာဝန်အရလုပ်ခြင်းမဟုတ်ပဲ မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည် ။ ဤကိစ္စများသည် ရာဇ၀တ်မှုဖြစ်သည် ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ခုံရုံးသို. ရှင်းလင်းချက်ပေးပါရန်တောင်းခံရမည်. စာသားဖြစ်သည် ။ တာဝန်အရဆိုတာဘာလဲ ။ နိုင်ငံ.ဘဏ္ဍာများအလွဲသုံးစားခြင်းသည် တာဝန်ဆိုသော စကားနှင်.အကျုံးဝင်ပါသလား ။ တာဝန်ဆိုတာခြစားခြင်းဖြစ်ပါသလား ။ ခြစားခြင်း ၊ လာဘ်စားခြင်း ၊ ကိုယ်ကျိုးအတွက်လုပ်ခဲ.ခြင်း ။ နိုင်ငံပိုင်ငွေကို မိမိသူငယ်ချင်း၊မိသားစု၊ဆွေမျိုးအတွက် အသုံးချခဲ.ကြခြင်းတို.သည် စင်္ကာပူတို. ၊တရုတ်ပြည်တို. ၊ဒိန်းမတ်တို.မှာဆိုလျှင်တော. ကြီးမားသောရာဇ၀တ်မှုဖြစ်သည် ။ သူခိုးကြီးသောအခါ ဓါးပြဂိုဏ်းဖြစ်သွားတတ်၏ ။ ဓါးပြကြီးသောအခါနိုင်ငံတော် ခြစားမှု ဟုခေါ်တွင်ရမည် ။ ခြစားမှုကို ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက ကာကွယ်ပေးခြင်းမျိုးတော.မဖြစ်စေလိုပါ ။ခေါင်ကမလုံသောအခါတအိမ်လုံးခြများ သောင်းကျန်းကြပါလိမ်.မည် ။
ယခုအခါ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများ၊သံအမတ်များ၊ စသုံးလုံး အရာရှိဟောင်းများ၊စသူများဖြင့်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ပြန်လေပြီ ။ ထုံးစံအတိုင်း အသံသာမြည်ပြီးအဆန်မရှိသော သကြံန်မြောက်အဖွဲ့ဖြစ်မည်လား ။စစ်ဗိုလ်ချုပ်အချင်းချင်းမို့ မတို့ရဲမထိရဲဖြစ်လေမည်လား။ မလုပ်မရှုပ်မပြုတ် ဆိုသည့် နည်းဟောင်းလမ်းဟောင်းအတိုင်းသွားမည်လား။ နိုင်ငံတော်နှင့်ပြည်သူလူထုအတွက်အမှန်တကယ် ရွပ်ရွပ်ချွန်ချွန်အလုပ်လပ်မည့်အဖွဲ့ဖြစ်မလားဆိုတာ အားလုံးကစောင့်ကြည့်နေမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
dawnmanhon: လူဟောင်းကြီးတွေပါနေတာ နားမလည်နိုင်စရာ သရ၀ဏ်(ပြည်)